Bilyaneer Afrikaan ah: Afrika waxay jeceshay Donald Trump - BBC News Somali
25 Jannaayo 2020
Bilyaneerka Koonfur Afrikaanka ah ee Patrice Motsepe ayaa madaxweyne Trump u sheegay in dadka Afrikaanka ahi ay isaga jecel yihiin taasi oo baraha bulshada ka abuurtay kala qeybsanaan baahsan oo ku aaddan hadalkiisa.
''Afrika waxay jaceshahay Ameerika. Afrika wey ku jeceshahay...waxaan rabnaa Ameerika iney sidaas oo kale sameyso. Adigana waxaan kaa rabnaa inaad Afrka jeclaato'', ganacsadaha ayaa sidaasi u sheegay Trump oo ku sugnaa Shirka Dhaqaalaha Adduunka oo ka dhacayay magaalada Davos ee dalka Switzerland.
Dadka hadalkaasi Mr Motsepe ka hor yimaaday ayaa sheegay inuu jagada afheenka Afrika isku magacaabay.
Waxaa jirtay waxbixin tibaaxeysay in Trump uu caan ka yahay waddamada Nigeria iyo Kenya.
Xarunta daraasadda ee Pew ayaa ogaatay in iyadoo waddamo badan oo dunida ah aysan ku kalsooneyn Trump ayuu haddana dalalka Kenya iyo Nigeria wuxuu ka helay taageero boqolkiiba lixdan shan oo Kenya iyo Nigeria oo boqolkiiba konton iyo siddeed ah.
Donald Trump oo afhayeen 'isu noqday'!
Mr Motsepe oo 57 sano jir ayaa Madaxweyne Trump u sheegay iney farxad u ahayd inuu la kulmo. Trump iyo Motsepe ayaa waxay sannadkii 2017-kii ka soo muuqdeen bogga hore ee jariiradda Forbes kuwaasi oo lagu tilmaamay iney leeyihiin maskax ganacsi oo aad u ballaaran.
"Waxaad haysaa shaqa wanaagsan," ayuu Trump ugu jawaabay.
Muqaal ku saabsan dhacdada ayaa lagu baahiyay barta Twitter-ka.
Jawaabaha laga bixiyay hadalkiisa ayaa lagu kala qeysamay iyagoo qaar ka mid ah dadka ay hadalkiisa ku tilmaameen inuu isaga kali ku yahay oo aysan qaaradda Afrika la qabin fikraddaasi.
Balse halka qaarkood ay sheegeen in marka ganacsiga iyo dhaqanka laga hadlaayo ay xishmad weyn Afrikaanka u hayaan Mareykanka.
Madaxweynaha Mareykanka ayaanan weli booqasho ku tagin Qaaradda Afrika balse waxa uu sheegay haddalo lid ku ah qaaradda.
Sannadkii 2018-kii, waxa uu gaashaanka u daruuray inuu yahay cunsuri, ka dib markii uu sheegay eray muran badan dhaliyay oo ahaa in Afrika ay tahay ''Meel wasakh badan''.
Markii dambe Midowga Afrilka ayaa dalbaday in Trump uu raali galin buuxda ka bixiyo hadalkiisaas oo ay sheegeen iney cunsurinimo ka muuqatay.
Balse maalmo ka dib Trump hadalka Trump, madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa khudbad uu jeedinayay ka sheegay: '' Waan jeclahay Trump, waxa uu Afrikaanka u sheegaa iney dhibaatooyinkooda xallistan''.
Goor dhoweyd ayuu Trump sheegay in Raysal Wasaaraha Itoobiya Abiy Axemed uusan u qalmin inuu ku guleysto billadda Nabadda ee Nobel-ka taas oo Abiy la siiyay sannadkii naga dhamaaday ee 2019-kii.
Sannadkii hore Donald Trump ayaa afar haween ah oo ka mid ah xubnaha Aqalka Congeress-ka u sheegay iney dib ugu laabtaan goobihii ay ka yimaadeen.
Haweenkaasi ayaa dhammaantood ku dhashay dalka Mareykanka marka laga reebo Ilhaan Cumar oo Mareykanka tagtay caruurnimadeedii.